Magacyada Dhalinyaradii maanta lagu Xasuuqay Magaalada Muqdisho. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Magacyada Dhalinyaradii maanta lagu Xasuuqay Magaalada Muqdisho.
Magacyada Dhalinyaradii maanta lagu Xasuuqay Magaalada Muqdisho.
Hoobiyeyaal maanta lagu weerarray Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay saddex dhalinyaro ah oo deganaa guri ku dhow dhismaha Safaaradii hore ee Jarmalka, degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho.
Weerarka oo ay sheegatay Alshabaab ayaa dhalinyaradda ku geeriyooray ka sokor waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya 6 qof oo ay ku jiraan Macalin iyo arday Dugsi qur’aan dhiganeysay oo Hoobiyuhu kusoo dhacay.
Dhalinyarrada ayaa kala ah:
Laba gabdhood oo wallaalo ah oo lagu kala magacaabo Faxdi Caddow Cabdi iyo Faa’iso Caddow Cabdi ayaa maanta ku geeriyooday hoobiye kusoo dhacay Gurigooda, waxayna ahaayeen laba gabdhood oo dhalinyaro ah, isla markaana mustaqbal fiican lahaa.
Allaha u naxariistee Faxdi Caddow Cabdi ayaa sanadkii hore ee 2020-ka ay ka qalin jebisay Jaamacadda Muqdisho, gaar ahaan Kulliyadda Dhaqaalaha iyo maamulka.
Sidoo kale waxaa Hoobiyaha ku dhintay Cabdicasiis Maxamed Xasan Tifey. Allaha u naxariisto wuxuu Cabdicasiis safar u ahaa, kuna sii jeeday dalka Turkiga oo ay ugu socotay Waxbarasho Jaamacadeed
Waxay hore dhowaan Alshabaab Qarax is-miidaamin ah ku dileen 7 dhalinyaro ah, kadib Weerar lagu beegsaday goob Maqaayad ah oo ku taalla degmada Shangaani.
Previous articleGudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Juventus, Andrea Agnelli, oo ka mid ahaa raggii soo hindisay tartanka goonnida ah ee European Super Luague
Next articleKooxo ku Hubeysan Bastolado oo goor dhawayd Dilay Cabdiraxmaan Kamaal oo ka mid ahaa Golaha deegaanka Warsheekh
Roobkii Guga oo ka curtay magaalada dhuusamareeb caasimadda...
Wararka ka imanaya caawa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegaya in Roobka guga ayaa maanta gelinka dambe ka curteen magaaladaasi. Qaar ka mid...
Ra’iisul Waaaare Maxamed Xuseen Rooble oo kulan la qaatay Xoghayaha...
Midoowga Afrika oo 4 sano qasaaro ku tilmaamay Dowlada Farmaajo
Cabdifataax Cali Cumar oo ah eedeysane dhawaan kasoo hor-muuqday maxkamadda ciidamada...
Ciidanka Puntland ka oo Weerar ku qaaday degaano buuraley ah oo ...
Magaalada Hargeysa oo ay gaareen wasiirka maaliyadda Itoobiya iyo ...
Hindiya gaar ahaan Delhi oo gebi ahaanba ka dhamaaday...
Dad isku Qoys ahaa oo xalay lagu dilay Gurigooda...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 26, 2021 0